Howl-gallo dad lagu soo qabtay oo ka soconaya magaalada Beydhabo – Radio Muqdisho
Ciidamada dowladda ayaa howlgallo ammaanka lagu sugayo oo dad badan lagu soo qabtay ka wada magaalada Beydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Dad ka badan 100 qof iyo gaadiid ayaa lagu soo qabtay howl-gallada oo maalintii labaad ka socda magaalada Beydhabo. Ciidamada ammaanka ayaa ku sugan waddooyinka ayagoo baaraya xaafadaha.
Taliyaha qeybta Booliska ee gobolka Baay Gaashaanle Sare Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ku warramay in dadka la soo qabtay lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihii Al-Shabaab, wuxuu sheegay in la baari doono kaddibna la sii dayn doono ciddii dambi lagu waayo.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa bishaan shanteedii qarxiyay goob maqaaxi ah oo ku taalla magaalada Beydhabo, halkaas oo ay ku dhinteen 15 qof, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 42 qof oo shan ka mid ah loo soo qaaday magaalada Muqdisho.
Agaasimaha Isbitaalka magaalada Beydhabo Cabdullahi Maxamed Aadan ayaa Radio Muqdisho u sheegay in 28 qof oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxa ay wali ku jiraan Isbitaalka, ayadoo xaaladdoodu ay soo hagaageyso.